ဆၧလ့ၩၥိၫ့ယ့ၫရှူ လၧဆၧလုဂံၪ့ဖၧၩ့. | Radio Veritas Asia
ထီးအဝ့ၫၥံၪၥူၫဝၭဆံၫ့ဆၧအမုနံၩလဖၪလၧၫ့ထၪ့ ဎွ့ၩထၪ့ဝ့ၫ ဘဲၫစမိစ့ၭအဆၧမၪလူၬအၥိၭနီၪ အဝ့ၫၥံၪ လ့ၩဆိၬဝ့ၫလၧယရုစလံၫ့ ဘဲၫၥိၭအမိအီၪက့ၪဝ့ၫလၧကဆါအမ့ၬယၫ (ဘဲၫဆၧကွ့ၭအၥၭလၧကဆါအ ဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့အဖၧၩ့အၥိၭ) က ယဲ ၦ ခွၫလၧ အ ဝဲ ထၪ့ ဆိၫဆၧ ဒၧၩ့ လး လ ဂၩ လါ လါ မိ ဘၪ ဆၧ ကိၭ ဝ့ၫ လၧ ဆၧ ဆံၫ့ ဎံၪ လၧက ဆါ အ ဂး ဒဲ လု ထၪ့ ဆၧ ဘဲၫ ဆၧ စံၭ ဝ့ၫ လၧ က ဆါ အ ဆၧ ၥီၪ့ ဆၧ ၥၫ့ အ ဖၧၩ့ အ ၥိၭ နီၪ ထိၪ လွံ နံၫ ဘံၪ့ အ့ၪ လ မွဲ ဘၪ တၭ ကၪ ကဲၪ ဖိၪ နံၫ ဘံၪ့ လီၫ.ယိခွါ ၦကိၭဝ့ၫအမံၩ့လၧစစံမအၧၫ့လဂၩအီၪဝ့ၫ လၧယရုစလံၫ့အဖၧၩ့လီၫ. ၦလဂၩနီၪမွဲအတီၩအလီၩ့ ဒဲအယူၭယၪ့ယွၩတၭ ယိလါဝ့ၫလၧအံၫစရ့လၭ အဆၧမၩမုၬဝ့ၫအဖၧၩ့ၥၭတၭၥၭမုဆံၫ့ဎံၪအီၪလၧအလီၩ့လီၫ.- ၥၭမုဆံၫ့ဎံၪဒုၭနဲၪဝ့ၫလၧ အလချႃၭဒၪ ဒံၭဘၪဆၧၥံၫတၭ မိဒၪဘၪအကဆါအဎရံၬနီၪလီၫ.-ၥၭမုအီၪလၧအလီၩ့အဘိၩ့ဘၭနီၪ လ့ၩနုၬဝ့ၫ
လၧဆၧလုအဂံၪ့ဖၧၩ့တၭ အမိအဖါဂဲၫဆိၬဖိၪၥၪယ့ၫၡုၬနီၪဘဲၫၥိၭအမိမၩဝ့ၫလၧအဂး ဘဲၫဆၧမၪလူၬအထူၫအရူၫအီၪဝ့ၫအၥိၭနီၪ လ့ၩနုၬဝ့ၫတၭ အဝ့ၫဒၪ ဆိၬထၪ့ဝ့ၫလၧအစူၪလီၩ့ စံၭထၪ့အၪ့အူၭယွၩ စံၭဝ့ၫ ကဆါဧ့ ဘဲၫနလူအၥိၭနီၪဘိၩ့နဲၪ့ယီၩကွဲၪ ဖျါနဎီးနၡၩယီၩမုၬမုၬဆံၭ.-
အဂဲးဘဲၫယီၩယမ့ၬဒၪဘၪယူၭနဆၧထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့ လၧနတဲၩ့ဝဲၩဝ့ၫလၧၦထီးအလူၬအမ့ၬယၫ ဆၧဖၩ့လဖျိၪ့လၧအဖၩ့ ထၪ့ဝ့ၫလၧၦဆၨၩလဖၪအဂး ဒဲနခ့ၫနၡၩၦအံၫစရ့ လၭဖိၪအလၩအဖၩ့ယူၭလီၫ.မွဲဆၧလၧအချဲၩ့ဝ့ၫလၧအဂဲးတၭအမိ ဒဲစယိၥၭထီၫမံၫထီၫမၪလီၫ.-
စစံမအၧၫ့ဆိၪဂ့ၩအဝ့ၫၥံၪတၭလီၩဘၪအမိနးမၫရံၫယိခွါ-ဘဲၫၦၡၩအၪဂၩအဆၧ ကိၪ့ထၪ့ဖၭလၩ့ မိအီၪဖျီၪတၭ အဝ့ၫလဂၩယီၩဘၪဆၧ အီၪက့ၪလၩ့ဝ့ၫလၧ ၦအံၫစရ့လၭဖိၪအၪဂၩ အဆၧ လၩ့ထံၩဖါအလးဒဲဂဲထုၪ့ထဲၩ့အလး ဒဲၦစံၭအၧၩ့ အလးတၭ နၭလဘံၪ့မိဆ့ၭဖျီၫ့နၥၭဒၪနဝ့ၫဆ့ လီၫ.
ၦလၧစအၭၡၧၫအဒီၪ့အကျၩ စဖၪ့နုၫအ့လၭအဖိၪ မုၪမီၪနးအၫ့နၫအီၪဝ့ၫလဂၩတၭ လၧအမုၪနၩ့အလး ခဲၫ့နီၪအီၪဎုၬဘၪလၧအဝၩ နွ့ၫနံၪ့ အၥၭၡါက့ၭယူၭလီၫ.- မွဲၦမုၪမဲၫဝ့ၫနီၪအနံၪ့ဎိၭဆံၫလံနံၪ့ကၪယူၭတၭ ဒုၪဆၧအၪ့ဆၧအီၩ ဒဲဘၩဆိၪဖၪဆၧတၭ မၩယွၩအဆၧလၧမုနၩနၩမုဆၫဆၫတၭ
စဲၪ့ဖၭလၧဆၧလုအဂံၪ့ဖၧၩ့အ့ၬ.- ထီးအဆၧၫ့အထီနီၪဂဲၫနုၬဝ့ၫတၭ စံၭ ထၪ့အၪ့အူၭကဆါတၭ လီၩဘၪအဝ့ၫဒၪအဂဲးအကၠီၪ့လၧၦလၧအယိလါဆၧထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့ အဖၧၩ့ၥၭလၧ ယရုစလံၫ့အဖၧၩ့ထီးအလူၬလီၫ.